Ijikwa gị Programming Interface | Martech Zone
Ijikwa gị Programming Interface
Thursday, May 20, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụ 2:30 AM ebe a na Paris, France… na m nwere ike na-ehi ụra otú ihe mma ime karịa dee a blog post! DK New Media arụ ọrụ na nso nso a na ụlọ ọrụ abụọ na nso nso a bụ ndị mejuputara teknụzụ iji jikwaa ha ntinye ntinye ihe omume (API). API abụrụla ihe dị ike ma dị mkpa na ikpo okwu ọ bụla ka ndị ahịa nwee ike ijikọta ma mepụta usoro ha.
Akụkụ siri ike nke itinye API n'ọrụ maka ngwanrọ ngwanrọ gị na-achọpụta na echedoro ụlọ ọrụ gị megide ndị na-agba ọsọ, na-arụ ọrụ nlekota na ọrụ mkpesa iji nyochaa ojiji, yana ịchekwa gburugburu mmepụta gị megide ndị ahịa mkparị na-adọkpụ sistemụ gị.
Kama ịjụ ọtụtụ narị otu egwuregwu kwa awa iji hụ ma enwere mgbanwe ọ bụla, anyị na-enyocha na a na-enyocha otu ọ bụla otu ugboro kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na Coyle Media ga-achọ iji aka gị melite otu, ha nwere ike ịme arịrịọ ahụ dịka otu. Nke a na - ebelata ọnụ ọgụgụ oku a na - akpọ ọtụtụ puku kwa ụbọchị. Ọ ga-adịrị anyị mfe karị ịjụ ha ajụjụ API ọ bụla 15 nkeji ọ bụla ahịa… ma nke ahụ bụ adịghị mkpa otú anyị wuru a mma echekwa iji hụ na anyị adịghị eme ihe n'ụzọ na Twitter na Facebook APIs. Yabụ nke ọma - anyị enwetabeghị nsogbu.
Ọ bụrụ na ikpo okwu gị dị oke mkpa maka ịmalite API, gị ga nye akwa mkpuchi ihe n’etiti API yana ngwa gị iji kpuchido arụmọrụ sistemụ. Na-atụfu ngwaike ngwaike na gị API abụghị azịza ọnụ ahịa ya. Enwere ọtụtụ API Ngwọta njikwa na ahịa nke na-emeghị naanị nke a, mana nwee atụmatụ siri ike nke na-enye gị ohere ịkwanye ndị ahịa (na-ekwe ka ọnụ ọgụgụ ụfọdụ nke oku kwa nkeji, elekere ma ọ bụ ụbọchị), nye akụkọ mkpesa na API oku, ma kwe ka ị nweta ego ma soro ojiji. Fọdụ ndị na-enye data na-akwụ ụgwọ site na oku ọ bụla ị mere (dịka ọmụmaatụ: Ogologo).
Zụlite ngwaọrụ ndị dị mkpa iji jikwaa gị API bụ ihe nke na-adịghị efu ọnụ ụbọchị ndị a ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ọrụ si ebe ahụ iji meere gị ya. Fọdụ ndị amaara nke ọma API Njikwa nhazi bụ:
ChaCha emejuputa ha API tinye n'ọrụ Mashery na usoro dị mfe. Ndị otu na Mashery mejuputara oku a ma nyekwa onye ọrụ ha maka ChaCha iji kwalite API ha nye obodo. Ọbụna ha nyere aka n'ịkwalite na ire ahịa nke API. Ọnụ ego nke ọrụ ọrụ ụlọ ọrụ dị ka nke a bụ obere ụgwọ ma ọ bụ nkwekọrịta nkwekọrịta maka otu onye nrụpụta na-eme $ 100K kwa afọ.
Y’oburu n’inyere onye n’enwe ahia na ahia ahia ya na API, ichoro iju ha banyere ha API njikwa ngwaọrụ na otu ha si enyocha, kpuchido ma hụ na nrụpụta anaghị emebi ndị ọzọ, ndị ume ngwu!
Tags: 3nkeAPIntinye ntinye ihe omumeChachamaserisistemụ sonoawebservius
Otu esi ahọrọ onye na-ere ozi SMS / Text